Musharax Prof. Cabdiweli Gaas oo maanta gaaray Galkacayo iyo shacabka oo soo dhoweeyey (Dhegeyso) – Radio Daljir
Nofeembar 9, 2013 3:52 b 0
Galkacayo, November 9, 2013 – Garoonka diyaaradaha ee magaalada Galkacayo waxaa maanta ka soo degay ra?isal wasaarihii hore ee Soomaaliyda mudane Cabdiweli Maxamed Cali (Gaas) oo haatan ah murashax u taagan xilka madaxtinimo ee Puntland.
Musharax Cabdiweli Gaas ayaa si diiran loogu soo dhoweeyey xaruunta gobolka Mudug, waxaana garoonka tegay dad badan oo shacab ah oo taageersan ra?isal wasaarihii hore ee dalka.
Prof. Gaas waxaa soo dhowayntiisa sidoo kale qayb lixaad leh ka ahaa ?dhinacyada bulshada oo isgu dhafnaa, nabaoono,Odayaal, siyaasiyin, dhalinyaro, haween iyo dhamanba qeybaha bulshada ee ku nool Gaalkacyo.
?reer Galkacayo soo dhowaynta qiimaha leh ee aad ii samayseen ayaan idiika mahadceliyaa, xilligan oo ay qoraxdu aad u kulushahay.? Ayuu yir Musharax Gaas oo shacabka kula hadlay gurriga uu ka degan Galkacayo.
Ra?isal wasaarihii hore ee Soomaaliya ahna murashax u taagan xilka madaxtinimo ee Puntland waxaa uu shacabka gobolka Mudug ugu baaqay in laga wada-shaqeeyo, amniga, ganacsiga, dhaqaalaha iyo horumarka Puntland.
Sawir-qaadee: Maslax Mukhtaar
Dhegeyso: musharax Cabdiweli Gaas oo si diiran loogu soo dhoweeyey magaalada Galkacayo
Ra?isal wasaare Saacid oo canbaareeyey weerar culus oo xalay lagu qaaday Makka Al-mukarama